Maitiro ekuvharidzira manhamba efoni pane iyo iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuvharidzira manhamba efoni pane iPhone
Kune imwe nguva ikozvino uye yakasimbiswa nedambudziko iro nyika zhinji dziri kutambura pasi rose, makambani aifanirwa kuchinja yavo bhizinesi zano uye ivo vari kusarudza kufonera vashandisi zvakananga kuvapa akasiyana masevhisi senge inishuwarenzi, katalog yekutengesa, kushambadzira kushambadzira ... Kuita kuti zvinhu zviwedzere, iyo nguva yavanowanzo sarudza kuita idzi mafoni kazhinji masikati kana isu tichidya uye zvakare ivo kazhinji simbirira zuva nezuva kusvika patinotora.
Neraki, ivo vanogara vachishandisa imwecheteyo nhamba yefoni uye nekutenda kumagadzirirwo eiyo iPhone yedu, tinogona kuvharidzira iwo manhamba efoni kuitira kuti vagotinetsa zvakare uye pasina chikonzero chekumisikidza iyo Usakanganise modhi pane yedu iPhone, nekuti yaizodzivirira vese vataibata vatisina kumisikidza sevanoda kubva mukukwanisa kutibata isu.
1 Bvisa mafoni kubva kubhuku rebhuku pafoni
2 Bvisa nhamba dzenhare pa iPhone
Bvisa mafoni kubva kubhuku rebhuku pafoni
Pakutanga uye chimwe chinhu chakakosha chiri tine nhamba dzenhare dzatinoda kuvharidzira dzakanyorwa muhurongwa hwedu, nekuti iyi sarudzo inongotitendera isu kuvharidzira mafoni kubva kubhuku renhare pasina sarudzo yekunyora nhamba dzenhare.
Kana tangochengeta nhamba dzenhare dzatinoda kuvharidzira mubhuku renhare, tinozoenda Zvirongwa.
Mukati meZvirongwa, tinoenda kubato rechina rezvisarudzo tinya Telephone.
Mune menyu iyo icharatidzwa pazasi, tinya pa Vakadzivirirwa mabhii.
Dzvanya pa Wedzera chitsva kuwana iyo yekutaurirana kana mabatiro atinoda kuvharira kuti tirege kugamuchira mafoni, mameseji uye FaceTime mafoni
Kamwe kusangana kwacho kwasarudzwa, iyo rondedzero ine vanofambidzana iyo isu takavharira inozoratidzwa Parizvino.
Kana isu takakanganisa uye tichida kubvisa nhare kubva pane yakavharirwa runyorwa, isu tinofanirwa kutsvedza kubatana kuruboshwe uye tinya kiinura.
Bvisa nhamba dzenhare pa iPhone
Iyi nhanho yakapusa kupfuura iyo yapfuura nekuti hazvina basa kufamba nemamenyu kuti uzviite, isu tinongofanirwa kubaya pane i yenhamba yefoni yatinoda kuvharira uye kupuruzira kusvika pasi pechiso nekudzvanya Vimba kuonana.
Kana isu tichida kuvhurira iyo yakafanana nhamba iri mubvunzo tinofanirwa kuenderera nenzira imwechete uye asi panguva ino tichaona sarudzo Svinura kuonana.
Inofanira kutakurwa mundangariro, sekutaura kwandataura pamusoro, kuti kuburikidza neiyi block isu tinongodzivirira kugamuchira mafoni, mameseji uye FaceTime mafoni. Kana isu tichida kudzivirira kunogamuchira mameseji kana kufona kuburikidza nekutumira mameseji, tinofanirwa kuzvivharira zvakananga kubva kunyorera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvharidzira manhamba efoni pane iPhone
Danillo Cezar akadaro
Hazvina basa kuti uwedzere iyo nhamba mune ajenda, hapana chekuenda mukufona kwazvino wobva wadzvanya pa i mukati medenderedzwa padyo nezuva rekufona uye chikamu chepazasi chinobuda kuzovhara kusangana uku uye chakatovharirwa.
Pindura Danillo Cezar
Chinhu chinosemesa kugamuchira mafoni iwayo, zvinokonzeresa kusagadzikana, makambani enhare haafanire kudaro, vanofanirwa kubhadhariswa faindi, nekuti ivo vanotumirawo mameseji asina basa ayo foni anozadza nemarara chete.
2Do, mukuru maneja maneja sekushandisa kwevhiki
Inonakidza, karenda yakakura inouya kuApple Watch